Shina mitarika lohataona sy lohataona matotra matotra | Rayson
Pu Foam Matory
Nanakodia an'i Bonnell Spring Matorany
Series Base Base
Polyester fiber ondana
Vokarina rehetra izy ireo araka ny fenitra iraisam-pirenena ny henjana. Ny vokatra nahazo sitraka avy ao an-toerana sy avy any ivelany na tsena.
Be izy ireo izao fanondranana ny 200 firenena.
Isan-karazany Premium Products
Miaraka 30 taona miaina ao amin'ny orinasa mpamokatra entana lohataona
80000 metatra tora-droa
80.000 metatra toradroa orinasa faritra
1600 metatra tora-droa
1600 metatra toradroa Shina kidoro efitrano fampirantiana
Mihoatra ny 700 mpiara-miasa
Output isam-bolana mihoatra ny 30.000 farantsa kidoro
100 tapitrisa dolara
Isan-taona Output lanjan'ny ny orinasa dia mihoatra ny 100 tapitrisa dolara
Rayson afaka mamokatra Hotel lohataona kidoro, taolana fandriana kidoro, fanao am-paosy lohataona kidoro, bonnell lohataona kidoro, mitohy lohataona kidoro, fahatsiarovana kidoro sombin-javatra, na LaTeX kidoro amin'ny fomba Compressed fisaka banga na ny horonan-taratasy fomba feno. Manana mihoatra ny 100 efa misy modely ho an'ny safidy.
01 - Customer hamonjy concept ny vokatra sy ny zavatra takiana
02 - Fanombanana sy ny famolavolana
03 - Market tombana
04 - Hamarino ny vahaolana amin'ny mpanjifa
06 - Santionany
07 - Filaharana fitsarana/ baiko be
08 - Tamberin'ny tsena
09 - Fanitsiana fomba vokatra
10 - Mandamina ny famokarana
11 - fandefasana
Raha mijery ny vokatray ianao dia hahazo fihenam-bidy tsy ampoizina, azafady mba hifandraisa aminay avy hatrany.
Maherin'ny 90% ny vokatra kidoro dia aondrana any Eoropa, Amerika, Aostralia ary ny faritra hafa eran'izao tontolo izao. Izahay dia mamatsy kojakoja kidoro ho an'ny Serta, Sealy, Kingkoil, Slumberland ary ireo marika malaza iraisam-pirenena hafa.
Kidoro Lohataona Classic Sweet 9 santimetatra
Kidoro Hybrid Spring Foam Plush 10 mirefy
Kidoro amin'ny efitra fatoriana gel fahatsiarovana foam pocket spring kidoro
Kidoro mihodinkodina ambony ondana mora vidy misy baoritra
Kidoro ho an'ny mpianatra na mpiasa
Kidoro amin'ny lohataona bonnell amin'ny haavon'ny hamafin'ny ondana
Foam fitadidiana habe mpanjakavavy manodina kidoro ao anaty boaty 8 inch
Fotsy 8 mirefy Queen Habe Hotel sy trano fanaka fandriana fandriana
Foshan Rayson Non Woven Co., Ltd. dia fiaraha-miasa Sino-US, naorina tamin'ny 2007 izay hita ao amin'ny Shishan Town, Foshan High-Tech Zone, ary mipetraka eo akaikin'ny orinasa malaza toa ny Volkswagen, Honda Auto ary Chimei Innolux. Ny orinasa dia eo amin'ny 40 minitra amin'ny fiara avy ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Guangzhou Baiyun sy Canton Fair Exhibition Hall.
Ny birao foibe "JINGXIN" dia nanomboka nanao ny lohataona tariby ho an'ny kidoro innerspring famokarana tamin'ny 1989, hatramin'izao, Rayson dia tsy Shina kidoro orinasa (30000pcs / volana), fa koa ny iray amin'ireo lehibe indrindra kidoro innerspring (60,000pcs / volana). ) sy PP tsy tenona lamba (1800tons/mois) mpanamboatra any Shina manana mpiasa mihoatra ny 700.
Maherin'ny 90% amin'ny vokatray no aondrana any Eoropa, Amerika, Aostralia ary ny faritra hafa maneran-tany. Izahay dia mamatsy kojakoja kidoro ho an'ny Serta, Sealy, Kingkoil, Slumberland ary ireo marika malaza iraisam-pirenena hafa. Rayson dia afaka mamokatra kidoro lohataona amin'ny hotely, kidoro lohataona paosy, kidoro lohataona bonnell, kidoro lohataona tsy tapaka, kidoro foam fahatsiarovana, kidoro hybrid foam fahatsiarovana ary kidoro latex sns.
Ny orinasa Rayson China mattress dia navitrika tamin'ny karazana hetsika sosialy rehetra, azonao atao ny mahita ny vaovao farany indrindra eto!
COC- Taratasy fanamarinana ho an'ny vokatra kidoro
Rayson dia afaka manolotra taratasy fanamarinana COC ho an'ny mpanjifa any Amerika afovoany, Amerika atsimo ary Afrika.
Modely kidoro vaovao 2021
Ny orinasa Rayson Mattress Company dia namoaka modely kidoro vaovao 20 tamin'ity taona ity, tsindrio ny vaovaonay raha te hahalala bebe kokoa!
Atao tsindraindray eto amin'ny Rayson ny fampianarana fanofanana kidoro
Rayson dia hanampy amin'ny fanofanana ireo solontenan'ny varotra tsindraindray mba hanomezana serivisy mpanjifa tsara kokoa ho an'ny mpanjifa.
Ahoana no hanalava ny androm-piainan'ny kidoro?
Ahoana no hampitomboana ny androm-piainan'ny kidoro? Torolàlana fikojakojana ny kidoro.
Manokan-tena hanatsara ny kalitaon'ny torimasonao izahay ary maniry ny ho tonga mpanolo-tsaina matory, amin'ny fanomezana kidoro tsara kokoa ho an'ny mpanjifa, manantena izahay fa hahazo fiainana tsara kokoa ny tsirairay!
WHATSAPP: +86-13536639410 / mailaka:info@raysonchina.com / Olona mifandray: Wendy Rong